Nihat Kahveci (Ku Dhashay 23 November 1979 Istanbul) Waa laacib u dhashay wadanka Turkey oo ciyaaraha ka fariistay hadda waxaa uu kaaliye tababare ka yahay Xulka Qaranka Turkiga. Beşiktaş [
(1979-11-23) 23 Nofeembar 1979 ( 40jir)
Villarreal CF 62 (18)
Villarreal CF B (Ast. Manager)
* Cayaaraha naadiyaasha waaweyn iyo goolasha waxaa la xisaabayaa horyaalka gudaha oo kaliya.
Nihat waa wax ka mid ah nidaamka dhalinyarada Beeshiktaş oo waxaa soo arkay Hürser Mustafa Cindir markii Nihat uu Beekiktaş ku ciyaaray xilli ciyaareedkii 1996-97. Wuxuu ku biiray kooxda koowaad ee Beşiktaş xilli ciyaareedkii 1997-98 markii uu 17 jir ahaa, waqtigaas John Toshack wuxuu ahaa tababaraha. Tan iyo markaas, Nihat wuxuu noqday ciyaaryahan muhiim ah.
Bishii Janaayo 2002, Nihat waxaa loo wareejiyay Real Sociedad € 5 million kadibna tababaraha Beşiktaş Toshack. Nihat ayaa sidoo kale ku biiray saaxiibkiisa Turkiga Tayfun Korkut ee Spain.
Waxa uu kulankiisii ​​ugu horeeyay u saftay bishii Janaayo, 26 kulan 3-1 looga badiyay Celta de Vigo, isagoo bedel ku soo galay daqiiqadii 72aad Xabi Alonso waxaana uu ciyaaray 18 daqiiqo.
Goolkiisii ​​ugu horeeyay waxa uu yimid kulankii barbaraha 2-2 ay la galeen Rayo Vallecano 24kii Febraayo 2002dii. Qaybtii hore ee xilli ciyaareedkaan, Nihat ayaa ciyaaray 11 kulan waxaana uu dhaliyay hal gool.
Sanadii 2002-03, xilli ciyaareedkiisii ​​labaad ee Spain, Nihat ayaa dhaliyey goolkii barbaraha ee Basque, kulankii furitaanka xilli ciyaareedka, isagoo kooxdiisa ka caawiyay inay 4-2 ku badiso. Wuxuu xilli ciyaareedkan ku dhameystay isagoo 23 gool u dhaliyey isagoo goolka labaad u dhaliyay kooxda ugu goolasha badan horyaalka xilli ciyaareedkan Roy Makaay (29 gool), waxaana uu ku xiran yahay Ronaldo. Xilli ciyaareedkan, Real Sociedad ayaa ku dhameysatay kaalinta labaad ee horyaalka xilli ciyaareedkan, kaliya labo dhibcood oo ka danbeysa Real Madrid.  waxaa inta badan ka mahadcelinaya weeraryahanka reer Serbia Darko Kovačević, sida saxafiga isboortiga Phil Ball oo lagu naaneyso "Little and Large ", marka loo eego farqiga farqiga u dhaxeeya labada (Nihat dhererkeedu waa 1.75 m, Kovačević waa 1.87 m).  Bandhigiisa, qaab ciyaareedkiisa wanaagsan, wuxuu u horseeday danaha kooxo kale, taas oo Nihat uu u soo jeestay dhagaha dhegta.
Xilli ciyaareedkiisii ​​seddexaad ee Real Sociedad, Nihat ayaa 32 kulan u dhaliyey isagoo dhaliyay 14 gool. Nihat ayaa sidoo kale ka ciyaaray UEFA Champions League Real Sociedad, iyadoo kooxdana ay la ciyaartay Juventus, Galatasaray iyo Olympiacos. La Real ayaa usoo baxday wareega 16ka, lakiin waxaa laga reebay Olympique Lyonnais, iyadoo 2-0 looga badiyay. Dhamaadkii xilli ciyaareedkan, Nihat wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Don Balón ee loogu talagalay Ciyaaryahanka ugu wanaagsan.
Xilli ciyaareedkiisii ​​afaraad, Nihat wuxuu saftay 23 kulan wuxuuna dhaliyay 13 gool. Dhamaadkii xilli ciyaareedkan, Nihat ayaa ka careysnaa ACL intii lagu jiray kulankii Sevilla, taasoo keentay inuu ka maqnaado lix bilood.
Bishii Juun 2005tii, warar ayaa sheegaya in Nihat lala xiriiriyay kooxda reer Russia CSKA Moscow lacag gaareysa € 20 million, Nihat ayaa ku adkeysanaya inuu doonayo inuu kooxda ku soo laabto si uu uga hor tago ka tagistiisa: "Haatan ma tagi karo, iskuma socon karo Real Sociedad, waan dagaalannay inaan isku dayo inaan sugno oo aan xasilino, waana mid ka mid ah kuwa ka fekeraya Xoogaa ka badan kooxda ayaa ka fiican, Axadii waxaan qaadnay tallaabo aad u muhiim ah oo ku saabsan Santander, haatanna waa su'aal ah inaan sii wadi doono tallaabooyinka horyaala horyaalka. " Nihat ayaa sidoo kale lala xiriiriyay
↑ "KADRO – SQUAD". Retrieved 3 July 2008.
↑ "Nihat Kahveci – International Appearances". RSSF.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nihat_Kahveci&oldid=179567"
Last edited on 4 Sebteembar 2018, at 09:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Sebteembar 2018, marka ee eheed 09:39.